Izinto ezongezelelekileyo zeAirTag zibonakala ngaphambi kwalesi siganeko sangokuhlwa | Ndisuka mac
Izinto ezongezelelweyo zeAirTags ziyavela ngaphambi komnyhadala wale mvakwemini
I-leaker eyaziwayo uJon Prosser kufuneka ukuba khange akwazi ukulala phezolo. Yonke into ibonisa ukuba ekugqibeleni ii-AirTag zabo zephupha ziya kuziswa ngale mvakwemini kumsitho we-Apple «Intwasahlobo ilayishiwe»Eza kuqala ngecala lesixhenxe emva kwexesha laseSpain.
Emva kweminyaka emibini yamarhe malunga nokubonakala okunokwenzeka kwimarike yendawo encinci yeApple ebizwa ngokuba AirTags, Zonke izikhombisi zibonisa ukuba ekugqibeleni baya kuthi thaca ngale mvakwemini. Ingoma yokugqibela evela e-oveni, ngaba ezi zirinji zibonakele namhlanje ukuze zikwazi ukuncamathisela iAirTag engxoweni okanye kwisutikheyisi, ngokungathi yithegi.
Emva kweminyaka engaphezu kwemibini yamarhe, abaninzi bakholelwa ukuba namhlanje lusuku ii-Apple's AirTags, uhlobo lwendawo efana nale Tile ezikhoyo kwintengiso, ziya kuboniswa kwabo balandela intetho ephambili yale mvakwemini. Ezinye iifoto zezincedisi ezintsha zezi AirTags zisandula ukupapashwa.
Le iplagi ijongeka njengethegi yemithwalo Yenziwe ngohlobo olufanayo lwesilicone njengemitya yeWatch Apple esiyaziyo sonke. I-AirTag ngokwayo iya kubekwa ngaphakathi kwindawo ejikelezayo, kwaye umtya omde uya kusebenza "ukuyibopha" kwisibambiso setyesi okanye ibhegi.
Imitya yokufaka i-AirTag kwisutikheyisi
Ngale mitya ungabopha i-AirTag kwisibambiso setyesi, umzekelo.
Ezi ntambo ziyaqondwa ukuba zenziwe ngabavelisi benkampani yesithathu kwaye hayi abathengisi abasemthethweni beApple. Ingxelo yeBloomberg kunyaka ophelileyo yathi iApple yayiphuhlisa izixhobo zayo zeAirTags, kubandakanya ityala lesikhumba kunye isincedisi sezitshixo.
Ii-AirTags ziyilelwe ukuhamba nezinto zomsebenzisi ezixabisekileyo, ezinje ngesitshixo. Umsebenzi nge I-Bluetooth kunye ne-ultra-wideband Kwaye ziya kubonakala kwisicelo se-Apple "Khangela". I-AirTag idlulisa i-ID yayo eyahlukileyo ngeBluetooth, enokuthi icholwe nasiphi na isixhobo esikufuphi se-iOS okanye iMac. Indawo okuyo iya kuvela kuFumana usetyenziso kuso nasiphi na isixhobo esikwi-AirTag.
Ukuziphatha okuninzi kuhambelana nezinye izinto ezihanjiswa yiBluetooth. Nangona kunjalo, ii-AirTags ziya phambili ngokubulela ekufakweni kwebhendi ye-Ultra-Wide band. I-chip ye-UWB iya kuvumela ukubekwa ngokuchanekileyo kwesalathi sendawo xa uku-20 yeemitha kwindawo yecandelo. Kwikhowudi yeenguqulelo zamva nje ze-iOS kubonwe ukuba kuya kubakho amava okwenyani angathandekiyo kwisicelo «search«, Ukuvumela umsebenzisi ukuba abambe i-iPhone yakhe kwaye abone utolo olukhombe ngqo apho into ibekwe khona kwinyani eyongeziweyo.
Siyathemba ukuba ekugqibeleni ngale njikalanga kuza kuboniswa ii-AirTag. Ndinomdla wokubona indlela iApple enokwenza ngayo ukuba isixhobo esiluncedo ekufumaneni ubhaka olahlekileyo, umzekelo, endaweni yoko sithintele ukuba sisetyenziselwe i «Ukuhlola»Indawo kanye yomntu ngaphandle kwemvume yakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » Izinto ezongezelelweyo zeAirTags ziyavela ngaphambi komnyhadala wale mvakwemini
"Ngoku kwaye emva koko" iya kuba luthotho lokuqala lwenkampani yemveliso yaseSpain yeApple TV +
U-Apple uphinde wamkele iParler kwiVenkile ye App ngokutshintshisa ukumodareyitha okungakumbi